5 Kala Goynta Xogta iyo Qiyaasta Suuq Xumida | Martech Zone
Sabti, Noofembar 28, 2015 Sabti, Noofembar 28, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhawaan tijaabinay tijaabada khibrada isticmaale ee boggeena, natiijooyinkiina waa loo qaybsamay. Dhageystayaashu way jeclaayeen waxyaabahayaga laakiin waxay ka careysiinayeen xayaysiiskeenna - gaar ahaan meeshii ay ka soo degaysay ama ka soo ifbaxaysay. In kasta oo imtixaanku ansaxiyay qaabka boggayaga, sahlanaanta socodka, iyo tayada waxyaabahayaga - waxay sidoo kale tilmaamtay wax ka careysiiyay dhagaystayaasheena guud.
Kala-goyntani waa wax ay si kasta oo suuqgeeyayaashu u leeyihiin inay isku dheellitiraan, kiiska ganacsiguna inta badan wuxuu tiriyaa falcelinta ama aragtida dhagaystayaasha. Maqal la'aanta dhagaystayaashaada ayaa ka hor imaanaysa, dabcan, inta badan lataliyeyaasha suuq geynta ee halkaas jooga ee aaminsan in ka jawaab celinta, dhageysiga iyo raacitaanka talada dhagaystayaasha ay tahay inay markasta soo hormaraan.
Halkan waxaa ah 10 Kala-baxyada Xogta iyo Fikradaha Suuqgeynta ee aan inta badan ka dhigno kuwa ku xun ganacsigeenna.
Isagoo u maleynaya in Macaamiisha oo dhami ay siman yihiin - Suuqgeynta 'Sarspa' dhawaan falanqeyn la bixiyay sababta ay macaamiishu ula socdaan noocyada warbaahinta bulshada. Jaantusku wuxuu si cad u muujinayaa in macaamiisha intiisa badani ay raacaan magacyada bulshada ee qiima dhimista, xaaqida, rasiidhada, iwm. Si kastaba ha noqotee, jaantusku kuma tusayo qiimaha fikradda macaamiisha kasta. Sicir-dhimista saafiga ah waxay hoos u dhigi kartaa astaantaada waxayna aasi kartaa shirkaddaada. Waxaan jeclaan lahaa inaan sharad ku dhigo in macaamiishaas oo arkay qaab nololeed isla markaana ku taageeray shaqadooda sadaqada ay muddo aad u qiimo badan ugu fadhiyaan caafimaadka ganacsiga shirkadda.
Haddii loo maleeyo in dhammaan soo-booqdeyaashu yihiin rajo - Ma ogtahay in taraafikada Bot ay ka badan yihiin 56% Analytics raacay taraafikada bartaada? Markaad tarjumeyso kanaga Analytics xogta, sidee bots u saameyn ugu leeyihiin bogagga gelitaanka iyo bixitaanka, heerarka kacsiga, waqtiga goobta, iwm. Way kala wareegi karaan tirakoobka si aad u xun oo aad ku dhiirrigelisay inaad beddesho boggaaga jawaabta… laakiin jawaabtu waxay u tahay bots, ma ahan rajo! Markaan dib u eegeyno degelkeenna, waxaan fiiro gaar ah u leenahay booqashooyinka tayada leh - dadka booqda bogag badan oo in ka badan hal daqiiqo ku qaata bartayada.
Haddii loo maleeyo in jawaab celinta Macaamiil ay hagaajinayso alaabtaada - Waxaan u shaqeeyay bixiye SaaS ah oo lahaa jadwal horumarineed oo xoog leh kaas oo ku soo daray kumanaan horumarin ah iyo daraasiin astaamo ah siidaynta kasta. Natiijadu waxay ahayd barxad bararsan oo aad u dhib badan, adag in la fuliyo, waxay sababtay isku dhacyo horumarineed oo aan dhammaad lahayn, waxayna yareeysay sii-haynta macaamiilkeenna. Natiijo ahaan, iibku wuxuu noqday mid dagaal badan, sifooyin badan ayaa la ballanqaaday, wareegga ayaa bilaabay dhammaantiis. In kasta oo shirkaddu kordhisay dakhli laguna soo iibsaday lacag aad u tiro badan, haddana weligood weligood wax faa'iido ah ma helin umana badna. Markaad weydiiso macmiil waxa aad hagaajinayso, macaamilku isla markiiba wuxuu raadiyaa cillad wuxuuna soo bandhigaa falcelintooda gaarka ah. Taabadalkeed, waa inaad la socotaa dhaqanka macaamiishaada si aad mudnaanta u siiso hagaajinta alaabtaada.
Isagoo u maleynaya in Hakadyadu ay ka careysiinayaan Rajada - Waxaan tijaabinay inbadan iyo in kabadan, raaligelin la'aan, waxaan had iyo jeer hirgalineynaa tiknoolajiyad carqaladeyn ah si aan uqabano dareenka booqdaha oo aan iyaga uxusano inay go'aansadaan bal inay siixirnaadaan macaamiisheena Weydii booqdayaashaada haddii ay jecel yihiin hababka xayeysiinta ee carqaladeynta ah ee aad geyneyso iyo, inta badan maahan, waxay dhahaan maya. Laakiin markaa adeegso hababka xayeysiinta waxaadna ka heli doontaa isla booqdayaashii yiri ma jecli iyaga ayaa ah kuwa gujinaya ee kula shaqeynaya.
Adoo u malaynaya inaad fahantay macmiilkaaga - Macaamiishayadu waxay inta badan sameeyaan fikradaha sababta ay dadku wax uga iibsanayaan - qiimaha, helitaanka, qiimo dhimista, adeegga macaamiisha, iwm oo had iyo jeerna waa khalad. Markaad weydiiso macmiil sababta ay kaaga iibsadeen, xitaa waxay kuu sheegi karaan sabab qaldan. Markaad ku tiirsanaato marka ugu horreysa ama u dambeeya ee taabashada, sidoo kale waxaad samaynaysaa fikrad xun. Macluumaadka ku-meel-gaadhka ah ayaa laga yaabaa inay bixiyaan caddayn rajo ah oo tallaabo qaadaysa, laakiin maahan sababta ay dhab ahaantii u iibsadeen. Cilmi baarista Persona waxay muhiim u tahay fahamka yaa kaa iibsaday iyo wareysiyada ka imanaya dhinac saddexaad oo aan eex lahayn ayaa ka jawaabi kara maxay kaa iibsadeen. Ha u maleynin inaad ogtahay, waxaad layaabi kartaa natiijooyinka.
Qeybta ugu hooseysa ee halkan, dabcan, waa in aysan macquul aheyn in la kala qaybiyo suuqgeynta hoggaamiyeyaasha u qalma ka haray inta kale Analytics xogta. Waa inaad ka sameysaa go'aanno suuq-geyn ah waxa soo jiidanaaya oo ku lug leh qaybtaas, in kastoo. Websaydhkaagu halkaa uma yaal inuu qof walba ka farxiyo; waa in loo arkaa inay tahay ilaha iibka ee soo jiita kuna mashquuliya booqdayaasheeda, iyaga oo u sii marinaya beddelid.
Waxaan khaladaad la mid ah ka sameeyay ganacsigeyga. Waxaan dhagaystay dad aad u tiro badan oo ahaa marna u socdo iibsashada alaabtayada ama adeegyadayada waxay ii sheegtaa sida aan ugu beddelayo waxyaabaha aan bixino iyo kharashyada. Waxay ku dhowdahay inay naga saarto ganacsiga. Mar dambe ma dhegeysto dadkaan - madaxayga waan iska fooraraa waxaanan sii wadaa waxa aan ogahay inay u shaqeeyaan macaamiisheenna. Waxa iyaga u shaqeeya maahan waxa adiga ama aniga kuu shaqeynaya.
Jooji sameynta fikradaha suuqgeynta adoo dhageysanaya oo daawanaya qof kasta taabanaysa astaantaada. Ku bilow hagaajinta khibrada dhagaystayaasha ee muhiimka ah… dhagaystayaasha oo laga yaabo inay wax kaa iibsadaan.
Tags: jawaab celinta macaamiishaxogta ayaa goysapopupsxayeysiinta joojintafikradaha suuq geyntakhaladaadka suuq geyntasuuqgeynta hoggaamiyeyaasha u qalmaboogahahorumarintamartida iyo rajada
Faa’iidooyinka Kuuboonada Imtixaanka iyo Qiimo dhimista